Sidee looma lumin ogeysiin kasta oo la socda taariikhda Android 11 | Androidsis
Haddii aad hesho ogeysiisyo badan maalin kasta, waxaa fiican inaadan iska iloobin fariimahaas muhiimka ah kaas oo aad ka hesho taleefankaaga casriga ah. Waxa ugu fiican waa in laga feejignaado, laakiin marwalba waxaa jira hawlo nooga dhigaya inaan ka warqabno wax kale, ha ahaato shaqo, qoys ama firaaqada guud ahaan.
On Android ma rabto inaad seegto ogeysiis kasta Waxaad ku sameyn kartaa taariikhda, waa mid aad u faa'iido badan oo waad arki kartaa waxyaabahaas muhiimka ah, ha noqoto fariin ama emayl. Nooca ugu dambeeyay ee nidaamku wuxuu rabay inuu horumariyo qaybtan, markaad la qabsato uma baahnid inaad wax uun ugu bedesho.
Haddii aad tirtirtay ogeysiis, xitaa waad awoodi doontaa inaad soo ceshato, ha ahaato ula kac ama ula kac, waa mid ka mid ah dhowr waxyaalood oo suurtagal ah in la sameeyo. Ogeysiisyada ah inaad daneyn weyn leedahay way wanaagsan tahay inaad marwalba iyaga fiiriso haddiiba mid kugu dhaco.
Telefoonada Android wax badan ayaa laga helaa dhamaadka maalinta adoo adeegsanaya barnaamijyadooda furan, ha noqoto fariin, emayl, shabakadaha bulshada iyo kuwa kale oo badan Isticmaalaha kiiskan wuxuu tan u habeyn karaa tan Android 11 si uu u helo kuwa had iyo jeer xiisaha noo leh, inkasta oo markii hore loo sii qoondeeyay inay dhammaantood na soo gaadhaan.
Si looga fogaado inaad lumiso ogeysiis kasta oo leh taariikhda Android 11 samee waxyaabaha soo socda:
Fur ikhtiyaarka "Dejinta" qalabkaaga gacanta
Guji "Codsiyada iyo Ogeysiisyada"
Markaad ku dhex gasho Codsiyada iyo ogeysiisyada taga "Ogeysiisyada"
Guji "taariikhda ogeysiiska"
Taariikhda Ogeysiinta dhaqaajiso ikhtiyaarka oo hadda marwalba waad awoodi doontaa inaad ku aragto baarka ogeysiinta farriin dhamaadka ah oo ay ku qoran tahay "Taariikh", marka aad gujiso halkan waxaad aadi doontaa liiska ogeysiisyada aad heshay maalintii oo dhan
Ogeysiisyada haddii ay yihiin sababo shaqo, waxaa wanaagsan inaad adigu shakhsiyeeysid si aad ugu hesho cod, kaasoo lagu muujiyey inta kale. Android 11 ayaa sidaas kuu oggolaaneysa inaad ka soo kabato mid ka mid ah ogeysiisyada, ha ahaato ama yaanay muhiim ahayn iyo dhammaanba kadib markaad xitaa tirtirto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Sidee looma seegin ogeysiis kasta oo leh taariikhda Android 11
WhatsApp Web iyo Desktop waxay helayaan xaqiijinta biometric